Puntland oo ka soo horjeesatay shirka beri u furmaya Madaxda DF iyo Somaliland
NENTEW June 13, 2020 1 min read
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Puntland ahna afhayeenka maamulkaas Jaamac Deperani ayaa ka hadlay wadahadalka maalinta beri ah Jabuuti uga furmaya madaxda sare ee DF iyo maamulka Somaliland.
Jaamac Deperani ayaa sheegay in wadahadal kasta oo labada dhinac yeeshaan uu noqon doono mid aan miro dhalin oo ujeedooyin kale laga leeyahay hadii aan laga qeyb gelin Puntland.
“Wadahadal Soomaaliya iyo Somaliland ah oo aan Puntland door laga siin anigu magaran karo ujeedka laga leeyahay, waayo cidda ay xuduudu ka dhexeeyso waa Puntland iyo Somaliland” ayuu yiri afhayeenka.
Afhayeenka ayaa sheegay in hadii laga shaqeynayo midnimada Somalia loo baahan yahay in laga qeyb geliyo wadahadalka dhinacyada oo dhan.
“Marka hadii la rabo inay wax hagaagaan oo midnimo dhab ah laga shaqeynayo waa in Masuuliyiinta Puntland, oo ay ku jiraan siyaasiyiinta Puntland ku metela Sanaag , Sool iyo Ceyn ay ka qeyb galaan wadahadalka, hadii kale waxaa uu wadahalku ku sifoobaya mid aan masiiri aheyn oo dano siyaasadeed uun laga leeyahay” ayuu yiri afhayeenka oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shaaciyay caawa in maalinta berri ah uu shir guddoomin doono kulan u dhaxeeya Madaxweynaha Somalia Farmaajo iyo Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi.
XIGASHO: Xafiiska Shabakada Allbanaadir.com
Next Africa: QM waa in ay qabataa kulan degdeg ah oo ku saabsan “cunsuriyadda”